Xiriirrada: Saamaynta Coolidge iyo raadinta cusub | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Relationships Saameynta Coolidge
Waxaa jira cillad ku timaad istiraatiijiyadda dabeecadda, cillad ku jirta nidaamka, haddii aad jeceshahay. La degitaanka qofka ugu horreeya ee aan jacayl la galno oo aan ku xirnaano ma caawin doonto faafinta hiddo-wadahayada. Faafinta hiddo-wadaha ayaa ah mudnaanta 1 ee Dabeecadda. Farxaddeena shaqsiyeed kuma xirna qorshaha. Markaa inta badan nuujiyadaha, oo ay ku jiraan annaga aadanaha waxay leeyihiin qaab, farsamo hore oo saynisyahano ugu yeeraan Saameynta Coolidge. Waxay ku shaqeyneysaa inaan naga helno 'lamaanayaasha' sheekooyinka 'mawduucyada' marka loo eego shaqadeena bacriminta. Waxay u shaqaysaa by dhisidda dulqaadka, ama la jilciso, isla qofka ama kicinta. | Waqtiga ka dambeeya joogitaankooda wuxuu noqonayaa mid yar 'abaalmarin' maskaxda asaasiga ah. Waqti ka dib waxaanu haysanaa rabitaan yar oo aan ka yaraynay isla lamaan galmo.
Halkan waa halka ereyga "Saamaynta Coolidge" loo malaynayo inuu asal ahaan ka soo jeedo. Madaxweynaha iyo Marwo Coolidge waxaa lagu soo bandhigayay [gooni gooni ah] agagaarka beer dawladeed oo tijaabo ah. Markay [Mrs. Coolidge] waxay u timid ardaaga digaagga waxay ogaatay in diiqii si aad ah u soo dhawaaday Waxay waydiisatay adeegaha inta jeer ee taasi dhacday waxaana loo sheegay, "tobanaan jeer maalin kasta." Marwo Coolidge ayaa tiri, "U sheeg madaxweynaha marka uu soo ag maro." Markii loo sheegay, Madaxweynaha ayaa weydiiyay, "Digaag isku mid ah marwalba?" Jawaabtu waxay ahayd, "Oh, maya, Mudane Madaxweyne, digaag ka duwan markasta." Madaxweynaha: "U sheeg taas Marwo Coolidge."
Beeraleydu sidoo kale way ogyihiin in dibiyadu ay lo 'kaliya ku riyaaqi doonaan hal mar xilli ciyaareedkiiba. Waxay ka raadin doonaan lo 'cusub duurka si ay u bacrimiyaan lo'da oo dhan. Barnaamijkan qadiimiga ah ee lagu faafinaayo hiddo sidaha badan ee suurtogalka ah, kuma haboona nolosheena xadaarada badan maanta. Waxaan dooneynaa inaan isku xirnaano oo aan sii wadno inta ugu macquulsan. Diimaha iyo bulshooyinku waxay isticmaaleen nooc kasta oo xeelado ah si ay ula wareegaan cayayaanka - ragga oo u oggolaanaya xaasas badan, iyaga oo laga guursado iyaga oo da 'yar iyo in qoysaska waaweyn lagu dhiirrigeliyo inay mashquul ku noqdaan, indhahana laga qabanayo marwooyinka iwm
Saameynta Coolidge iyo Porn
Waa cilladan ku jirta noolaha, saamaynta Coolidge, taas oo u saamaxday warshadaha qaawan ee internetka inay ku dhex milmaan ganacsi balaayiin doolar ku kacaya. Isla marka uu qofku 'u bacrimiyo dhergitaankiisa' rafiiq galmo raalli ka ah, wuu joojin doonaa. Tani waxay dhacdaa xitaa haddii ay tahay uun sawir mid ah. Kadib maskaxdu waxay soo saartaa waxyar "ka dib" daawada 'dopamine' waxayna ugaarsataa hareeraha fursado cusub oo bacrin ah. Iyada oo kudhowaad 10 milyan oo fiidiyowyo qaawan ah lagu cuno gudaha Boqortooyada Midowday oo keliya maalin kasta, looma baahna jaallooyin muuqda oo diyaar u ah Waxaas oo dhami waxay ku socdaan heer suuxsan laakiin waxay saameyn ku yeelanayaan dabeecadaha maalinlaha ah midkoodna wax yar.
Warka fiicani waa inaanan ku qasbaneyn inaan ku xayirnno "Coolidge Effect". Bini'aadamku waa caqli badan yahay marka aynu maskaxdeena u gudbino. By barashada in la yareeyo saamaynta dopamine aad u badan ee maskaxda iyo dib u dhiska dheelitirka oo leh oxytocin dheeraad ah sidaa darteed hoos u dhigista heerarka buufiska sidoo kale, waxaan ku dhiirigelinaynaa bondyada iyo xiriirka badan oo jecel. Kuwani waa kuwo waaraya oo naga caawiya inaan horumarino labadaba shakhsi ahaan iyo wadajir. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan tan waxaan si taxadar leh ugu talinaynaa website-kan waa www.reuniting.info.
<< Jacaylku Sida Rabitaanka Galmada Yaraynta Rabitaanka Galmada >>